Bishnu Rimal's Website » Blog Archive » प्रचण्ड समीकरणको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ
प्रचण्ड समीकरणको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ
‘एकले आरोप लगाउने र अर्कोले जवाफ दिने स्थिति दुःखद’
काठमाडाैं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको विवादले यतिबेला सचिवालय बैठकमा प्रवेश पाएको छ। प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लिखित रुपमै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएपछि विवाद छताछुल्ल भइसकेको छ।
नेकपा नेताहरु यतिबेला एकले अर्कालाई खुइल्याउने र बदनाम गर्नेमा केन्द्रित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सरकारको मात्रै काम गरिरहनु भएको छ कि पार्टीमा पनि ध्यान दिइरहनु भएको छ?एकदमै राम्रो थियो। प्रधानमन्त्रीले सरकार २ वर्ष पुगेको अवसरमा गत वर्ष फागुनमा संसदलाई गर्नुभएको सम्बोधनलाई तपाईं हामी हेर्न सक्छौं। त्यसक्रममा उहाँले भन्‍नुभएको छ, पहिलो वर्ष २०७५ लाई मैले आधार वर्षको रुपमा बनाएँ। यसले संघीयता कार्यान्वयनमा आधारहरू पूरै तयार भए।
एक अध्यक्षले अर्काे अध्यक्ष विरुद्ध आरोप लगाउने र अर्कोले जवाफ फर्काउन पर्ने परिस्थितिमा जानु नै दुःखद र नराम्रो हो। हामीले दुई पार्टीको एकता गर्दा न त संख्याको हिसाब गरेका थियौं न त यसरी आरोप प्रत्यारोपको परिकल्पना नै।दुवै अध्यक्ष मुठो बोकेर मैदानमा दौडिनुभएको छ। एउटा हाकाहाकी बोलिरहनुभएको छ। आफ्नो कार्यालयलाई उहाँले चाहिँ मन मिल्ने साथीहरुको हेडक्वार्टरजस्तो बनाउनुभएको छ। त्यसको फिराद गरि रहनुपरेको छ भने अरु सचिवालयका बिचरा साथीहरुलाई किन टिप्पणी गर्ने? प्रचण्डको सचिवालयले अथवा केपी ओलीको सचिवालयले बिगार्यो भनेर पक्षपक्षमा जानु बेकार छ।
विभिन्‍न समयमा कम्युनिष्ट पार्टीका गठबन्धनका सरकार बने। गठबन्धन सरकारको ‘नेचर’ले हामीले काम गर्न सकेनौ भन्यौं। ०६५ को चुनावपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीले अत्यधिक मत पायो, त्यसले आफूलाई थेग्न सकेन।
यो कुरामा जाँदै नजाऔँ । दुवै अध्यक्ष मुठो बोकेर मैदानमा दौडिनुभएको छ। एउटा हाकाहाकी बोलिरहनुभएको छ। आफ्नो कार्यालयलाई उहाँले चाहिँ मन मिल्ने साथीहरुको हेडक्वार्टरजस्तो बनाउनुभएको छ। त्यसको फिराद गरि रहनुपरेको छ भने अरु सचिवालयका बिचरा साथीहरुलाई किन टिप्पणी गर्ने? प्रचण्डको सचिवालयले अथवा केपी ओलीको सचिवालयले बिगार्यो भनेर पक्षपक्ष ‘वार’ मा जानु बेकार छ।
२८ कात्तिकमा अध्यक्ष प्रचण्डले बाँडेका प्रतिवेदन (तपाईंहरुको भाषामा आरोप पत्र) को प्रधानमन्त्रीले १४ मङसिरको प्रतिवेदनमार्फत आरोपहरू खारेज गरें भन्‍नुभएको छ। उहाँको प्रतिवेदन आउनुअघि पार्टी विभाजन हुन्छ कि भन्‍ने आकलन गरिएको थियो, त्यसमा प्रधानमन्त्री अलि संयमित हुनु भएको देखियो। तर आरोप खण्डन र प्रतिकार प्रचण्डभन्दा कम छैन। यसलाई विवाद समाधानको विन्दु भन्‍न मिल्ला? खण्डन गर्दा गैरराजनीतिक र फौजदारी आरोप पनि लगाउनुभएको छैन। बरु प्रचण्डले भनेका कतिपय कुरा तपाईँजस्तो जिम्मेवार मानिसले बोल्नु हुँदैनथ्यो। त्यसले अप्ठेरो पर्छ भनेर सम्झाउने कोसिस गर्नुभएको छ।
अगाडिका कुरा पनि त्यहीँ छन् यदि पुगेका छैनन् भने त्यसमा त बहस गर्न सकिन्छ। तर दुई अध्यक्षलाई आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने जुन जिम्मेवारी दिइएको छ त्यसरी काम नगरी सरकारमै केन्द्रित हुँदा समस्या भएको हो।यसमा जो–जो नेता संलग्‍न भए पनि यस्तो केटाकेटीपना किन देखाएको ? कुन शब्दमा लिखत गर्दा इतिहासमा के दर्ज हुन्छ। यसले कसलाई असर पार्छ भनेर सोच्नुपर्दैन? कमसेकम कमरेड प्रचण्डले त सोच्नुपर्थ्यो। जसले थप्नुभएको भए पनि जसले उचाल्नुभएको भए पनि मेरो एउटा आग्रह के छ भने, कमरेड प्रचण्ड यो समीकरणको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ।
यसले कस्तो सन्देश दिन्छ भने लगाइएका आरोपको खण्डन गर्दै जाँदा आकाशतिर फर्केर थुकेजस्तो भएको छ। ‘कट अफ डेट’ भनिएको भदौ २६ अघिका कुरालाई प्रचण्डले उठाएपछि त्यसको जवाफ दिनै पर्ने भएपछि स्पष्ट पारेको हुँ भनी प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। हाम्रो पार्टीको रोल नम्बर १ देखि ९ सम्मका जसलाई हामीले कोर अफ द लिडर भनेका छौं। त्यो तहका नेताहरूबाट यस्ता गतिविधि हुन्छन् भने नाम त अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीको छ।
त्यसो भए अहिलेको विवाद समाधान कसरी हुन्छ?यहाँ त दुई नेताको कुरा मात्र छैन, पछाडि बसेर काखी ठोक्ने र सिठी मार्ने साथीहरुको बढी ठूलो अप्ठेरो देखिरहेको छु। यदि उहाँहरु आफूले उठाएका समस्या समाधान गर्ने तहमा हुनुहुन्‍न भने नेतृत्व गर्ने क्षमता गुमाए भनेर स्वीकार गर्नुपर्‍यो।